Maamulaha guud ee British Airways ayaa ka hadlaya mustaqbalka duulista
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wareysiyo » Maamulaha guud ee British Airways ayaa ka hadlaya mustaqbalka duulista
Airlines • Aviation • Safarka Ganacsiga • Wareysiyo • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Wareysiga tooska ah ee British Airways Sean Doyle wuxuu kaga hadlayaa mustaqbalka diyaaradda iyo guud ahaan warshadaha duulista adduunkan aan weli-safka faafin.
Weligeen kuma arag wax sidan oo kale ah duulimaadyada leh saamaynta COVID-19. Tan ka hor, waxaan haysannay 9/11, oo noocee ah mid aan riwaayad u ahayn marka la barbar dhigo.
In ka badan hal xagaa, diyaaradaha waxay ku qasbanaadeen inay ku shaqeeyaan boqolkiiba 5 awoodooda.
In la yiraahdo waxay noqoneysaa tartan halkaan ka jira hoos u dhigis ayaa jirta.
Muxuu yahay madaxa shirkadda British Airways aragtida mustaqbalka duulimaadka markay tahay tartankeeda shirkadaha kale ee waaweyn ee Yurub?
Akhri wax ku saabsan duulimaadka aragtida madaxa shirkadda British Airways Sean Doyle maadaama uu wareysi la yeeshay Peter Harbison, Guddoomiyaha Emeritus ee CAPA - Xarunta Duulista - ama dhagsii xiriiriyaha oo dib u fadhiiso oo dhageyso.
… Gaar ahaan booska lacagta iyo qaababka kala geddisan ee ay dawladaha Yurub qaadeen, labadaada shirkadood ee waaweyn ee sida buuxda u wada adeegga Yurub waxay ahaayeen kuwo aad u muhiim ah, si ay u adeegsadaan erey cayriin ah, oo ay damiintay dawladdoodu in badan. Waana ogahay Willy Walsh horaan u sheegay in shirkadaha diyaaradaha midkoodna aan damiin laga noqon karin. Waxoogaa taageero ah ayaa loo qabtay British Airways laakiin dhawaanahan gaar ahaan. Sidee taasi u saameyneysaa booskaaga tartan ee labada kale ee saddexda ugu waaweyn Yurub?
Hagaag, waxaan u maleynayaa fekerka ugu horeeya ee aan dhihi karo waa in, IAG, aad ayaan ugu deg degnay wax ka qabashada is-caawinta, waxaana u maleynayaa inay taasi diirada saartay seddex ilaa afar durdur oo kala duwan. Waxaan u maleynayaa tan hore inay tahay inaad baxdo oo aad kor u qaaddo xisaabaadka ganacsiga sida ugu fiican ee aad awoodid, waana ku guuleysanay taas. Waxaan leenahay arrin xuquuq ah, waxaan tagnay suuqyada debaajiga, ka dibna waxaan si dhab ah u galnay xarumaha dowladda qaarkood qaab UKEF ah oo loogu talagalay British Airways illaa laba bilyan ka hor Kirismaska, Iberia, Vueling iyo Aer Lingus runtiina waxay raaceen wax la mid ah waddooyinka. Marka waxaan u maleynayaa in deynta lagu heli karo shuruudaha ganacsiga ay ka mid ahayd noocyada durdurrada ee aan raadineynay in la noo suurtageliyo, waana ku soo dhacnay taas. Waxaan u maleynayaa in tan labaad ay aheyd in la aqoonsado culeyska xaalada iyo in si dhaqso leh loo badalo ganacsigaaga, waxaana u maleynayaa in labada British Airways, Aer Lingus, iyo shirkadaha kale ee duulimaadyada ee kooxda oo dhan ay sameeyeen.